Top Iri Best AVI DVD Players
Audio Video Interleave format, aka AVI, bụ a video ngwaahịa kere site Microsoft. Ọ bụ usoro ihe omume nke ejiri ọdịyo na video ke otu faịlụ nke mere ọdịyo bụ mgbe niile na synch. E nwere ọtụtụ narị video Player si n'ebe, ma ụfọdụ ka ndị ọzọ mma. Ka anya na n'elu iri AVI Player si n'ebe.
Award emeri, ibu ewu ewu (ji ọtụtụ iri nde ndị mmadụ), na mfe iji, VLC okụt onwe na elu nke ọtụtụ anatara. Ọ na-akpọ mgbe ụfọdụ a "ga-enwe", ebe ọ bụ na o nwere ike ịrụ a dịgasị iche iche nke video formats, na-emeghe iyi software, nke pụtara na ọ bụ kpam kpam free. Ya interface bụ Dịkwa n'Usoro, na mgbe ụfọdụ na-achọpụta na ọ na-agwụ ike, ọ pụtakwara na ọ bụ nnọọ mfe n'ihi na oge mbụ ọrụ ka malitere. Ma na ị chọrọ ịhụ Blu-ụzarị, mgbe DVD, ma ọ bụ ndị ọzọ HD videos, VLC nwere ike ime ya.
Ndị nwere kọmputa 90s ga-echeta Real Player. Nke a abụghị nne gị Real Player, ọ bụ ezie. Capable nke na-akpọ a myriad nke formats, na akada video si weebụsaịtị ndị ọzọ karịa YouTube, nke a dị ike free ọkpụkpọ dị mfe iji, na a adụ isi awọ ndabere nke na-adịghị ịdọpụ uche. Ọ na-nwere atụmatụ na enye gị ohere download enyi gị 'Facebook videos. Ọ bụghị ibu na-akpali akpali anya na na ojiji, ma ọ dịghị mkpa na-adị. Ọhụrụ OSs, gụnyere Windows 7 na 8, nakwa dị ka Android na iOS, ị nwere ike ịnweta ígwé ojii mma, kwa.
Nke a freeware omume na-abịa juru n'ọnụ na otutu codecs wuru n'ime software. Ọ bụrụ na ọ na-eme na-ezute a video na-achọ a codec ọ na-adịghị, ọ na-enyocha internet n'ihi na ọ na-akpaghị aka. The interface nwere a dịgasị iche iche nke skins ya nwere ike iji, na o nwere a dịgasị iche iche nke mkpirisi wuru na. Ọ na-adịghị, Otú ọ dị, ndị nwere ike ime screencaps ma ọ bụ maliteghachi playback. Ọ pụrụ ọbụna aka Blu-Ray format MKV, ezie na ụfọdụ, ndepụta okwu ga-anaghị egosipụta n'ụzọ ziri ezi. A na-adịbeghị anya update mma ikike na-egwu ibu AVI faịlụ (ndị karịrị 2GB).
Dị ka aha-apụta, a bụ ihe zuru ezu video ọkpụkpọ na ike ijikwa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke formats, ezie na ọ na-adịghị nwere ikike iji aka ndepụta okwu. E nweghị ndị na equalizers na mmemme ma. Ọ dị mfe iji na mfe ka malitere. The ọkpụkpọ njikwa n'akụkụ nke video, ya ka ị ghara-enwe nchegbu banyere ha na-eme ha nke gị video playback. Ụfọdụ ọrụ ndị achọpụtawo na mgbe ha na-abịa imegide a video na-agaghị na na na VLC, ọ na na na TVP. Ọ bụghị ndị kasị yi interface, ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Nke a ọkpụkpọ adịghị weghara a otutu ohere na kọmputa gị, na interface bụ mara mma. Ọ nwere ike igwu fọrọ nke nta ọ bụla video ma ọ bụ ọdịyo format, na ọ dị mfe ka malitere na-eji. Wuru n'ime software ihe fọrọ nke nta 200 codecs, na ọ na-akpaghị aka Downloads ndepụta okwu na asụsụ mba ọzọ na fim. Ọ nwere customizable interfaces dị iche iche na skins, na i nwere ike ime na ihuenyo ndu. Redio ọkpụkpọ adịghị abịa na ihe ọ bụla etinyegoro ụgbọ, na-enye gị ohere iji Ibu Ibu gị onwe gị na-enweghị ka ihichapụ ọwa ị na-achọghị. E wezụga videos, o nwere ike ịrụ DVD na VCDs, na ya nwere ike enuba music.
Ị chọrọ a ọkpụkpọ na ike ijikwa bụla ọnụ ọgụgụ nke DVD mpaghara? Na ị chọtala ya na WinX. Ezie na interface bụghị snazzy, ọ nwere elu àgwà video playback ikike. Ọ na-akwado a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke video formats, gbakwunyere ị nwere ike ịgbanwe asụsụ, na-eme na ihuenyo Onye ndu, ịmepụta listi ọkpụkpọ, na ibe edokọbara gị nkiri. Ọ na-eme nwere ụfọdụ ókè na configuring mgbe ị wụnye ya, na ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka, ọ dịghị enyemaka faịlụ. Ị nwekwara a toolbar ahụ bụ mgbe nile mgbe ị na-ekiri vidio na ihuenyo zuru oke.
Nke a ọkpụkpọ ngwugwu a ntụmadị! Ị nwere ike igwu a dịgasị iche iche nke ọdịyo na video formats, ma ọ bụrụ na ọ chọrọ a codec, ọ Downloads ya n'ihi gị. The interface nwere ike ahaziri na a dịgasị iche iche nke skins. Ị nwere ike Bookmark gị videos, na-na ihuenyo Onye ndu, ele ndepụta okwu, na-awụlikwa elu ka a isi. Njikwa nwere ike mere site na iji keyboard ma ọ bụ gị òké, dị ka n'ịgbanwe gị olu site scrolling òké wheel na ala. A ọrụ ndu dị online.
Nke a video ọkpụkpọ adịghị eji codecs. Kedu? Unu nụrụ nri - Ọ dịghị codecs. Ọ na-ekere na videos enweghị ha. Ọ utilizes ihe a na-akpọ MPlayer engine kama. The drawback a bụ ọkpụkpọ adịghị eme nke ọma na DRM echebe fim. Ọ agwụ elu-akpọ mkpachị ma ọ bụghị zuru nkiri. Ọ na-eme ka i maliteghachi play ebe ị hapụrụ anya, ọ na-enye gị ohere iji hazie gị ndepụta okwu. Ị nwere ike ịgbanwe font na size nke ederede na-eme ka ọ dịkwuo mfe na-agụ. Ọ nwekwara ike aka internet gụgharia video, gbakwunyere ịgbanwe ọsọ na nke a video arụ azụ.
Nke a free omume nwere ike ime video playback nakwa dị ka gụgharia video. Ọ na-adịghị weghara ukwuu ụlọ na kọmputa gị, nke bụ a anya gbakwunyere. The interface dị mfe, ma i nwere ike hazie ya Otú ọ dị na ị chọrọ, mgbe ọ bụla ị chọrọ. Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu ọdịyo faịlụ, ọ nwere ike mbubata album artwork n'ihi na ị, igwe-oji mma na-ahapụ ị na-akọrọ gị faịlụ na enyi. Ọ bụrụ na ị na-amasị 3D fim, na KMPlayer nwere ike ijikwa ha, kwa. Playback nhọrọ ka ị tinye nzacha, ime ihuenyo Onye ndu, na ọcha ajị ajị video faịlụ.
Nke a ọkpụkpọ bụghị nanị ejiri MKV faịlụ, ma ọ pụkwara aka MOV, AVI, MPEG, .mp3, na .mp4. Ọ dị mfe iji, nke dị mma, n'ihi na e nweghị enyemaka menu. Ọ bụ freeware, na ya anya dị ka ya. The interface bụ isi, featuring a playback menu na okwu na ya nakwa dị ka a oge mmanya na i nwere ike iji slide na-atụ ma ọ bụ azụ. Ya-enye gị ịgbanwe video playback ọsọ, ma ọ dịghị nwere audio equalizer mmanya ma ọ bụ ihe ọ bụla video mmetụta. Ma, ọ bụrụ na ị na-achọ a video ọkpụkpọ na ike ijikwa Blu-Ray na ndị ọzọ na video formats, nke a bụ ihe niile ị chọrọ.
Ọtụtụ nhọrọ! Dabara nke ọma, ebe ọ bụ na a ọnụ ọgụgụ nke ndị omume na-freeware, i nwere ike iri ha maka a ule mbanye na-ahụ otú ị na-amasị ha, mgbe ahụ dị nnọọ na-ndị ị chọrọ. Gị AVI faịlụ ndị na otu nke kasị nkịtị formats, otú ọ bụla nke a Player ga-enwe ike iji aka ha. Gị ịma aka bụ ịchọta onye na anya dị nnọọ mma.
The Top 5 Professional Data-ere Ọkụ softwares
Top 5 Virtual DVD Alternatives
Top 10 DVDStyler Alternatives (Windows na Mac)
Top 10 Best DVD Ịmụta Guitar
Ọ bụla-atụ aro DVD ụlọ nyocha Alternative?
Pal ka NTSC Ntụgharị: Olee otú iji tọghata PAL ka NTSC
TP ka DVD - Olee otú iji tọghata na Ọkụ TP ka DVD
> Resource> DVD> Top Iri Best AVI DVD Players